IApartment yesitudiyo sabucala--1/3 yeemayile ukuya ePearl - I-Airbnb
IApartment yesitudiyo sabucala--1/3 yeemayile ukuya ePearl
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguRichard
Wamkelekile! Siyazingca kakhulu ngesimo sethu seSuperHost -- nceda ujonge uphononongo lwethu!
Coca, Ukuzola, Bucala, Ikhuselekile, kwaye iKhusekile. Igayidi yokungena kude nesitrato. Ukhululekile kwaye ukufutshane nePearl.
Igumbi elisanda kwakhiwa le studio ngaphezulu kwevenkile yamaplanga - ivenkile kunye nesitudiyo esakhiwe kwiminyaka eyi-8 eyadlulayo xa yonke le ndlu yalungiswayo. Ibhedi ekhululekileyo yobukhulu bokumkanikazi kunye nebhedi yesofa yendlovukazi enemithombo emitsha kunye nomatrasi. Hamba uye kuFikelelo lweMyuziyam yeRiverWalk; ngaphantsi kweekhilomitha ezi-2 ukuya e-Alamo. Ubukhulu be-4 abadala
Ivenkile yethu yokwenza amaplanga egaraji yayisanda kwakhiwa ngo-2013 eneflethi engentla. Akuzange kubekho naziphi na izithuthi ezihlaliswa egaraji; Ihlala kwivenkile yokwenza amaplanga kwi-hobbyist. (Cela ukukhenketha okanye ubone ifanitshala yobugcisa kunye nesitayile sobugcisa!)
32" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-HBO Max, intambo yepremiyamu, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.97 · Izimvo eziyi-685
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi685
Sihlala kwindawo echongiweyo yembali yendawo yaseTobin Hill, kwindlu yembali (icwecwe kunye nazo zonke!). Indlu yethu, njengabanye abaninzi kulo mmandla, ineminyaka engaphezu kwe-100 ubudala, inesilingi zeenyawo ezili-10 kunye neebhodi zebhodi eziyi-intshi ezili-12. Ngelixa igama eliyimbali lithintela utshintsho lwangaphandle, sivumelekile ukuba siphucule ingaphakathi ngamagumbi okuhlambela amatsha kunye nekhitshi langoku kunye nendawo eluncedo. Indawo intle, inamakhaya anomdla, abamelwane abamangalisayo, kwaye ikufuphi kakhulu nedolophu yaseSan Antonio kunye nazo zonke iindlela ezinkulu. Sihamba sisiya ePearl, iindawo zokutyela, iiklabhu zejazz, igrosari yekona, kunye neMuseum Reach of the Riverwalk.
Wamkelekile ukuba uzibandakanye nathi kwiveranda yethu engaphambili ngeglasi yewayini rhoqo ngorhatya. Iyure yolonwabo imalunga ne 5 ish. Sisoloko sikhona ngexesha lokuhlala kwakho, kwaye siqhele ukufumaneka ngalo naliphi na icebiso, unxunguphalo, iingxaki, okanye imiba onokuba nayo xa ukude nekhaya lakho. Singahlala sikuxelela ukuba ungapaka phi, zeziphi iimyuziyam ezibonelela ngendawo yokungenwa simahla, okanye apho eyona BBQ igqwesileyo ikhoyo!
Songeze iyunithi yefestile ye-AC ukongeza i-Mini-Split kwezona ntsuku zishushu zasehlotyeni. Ngokuqhelekileyo awuyi kufuna, kodwa uJulayi no-Agasti ZISHUSHU.
Wamkelekile ukuba uzibandakanye nathi kwiveranda yethu engaphambili ngeglasi yewayini rhoqo ngorhatya. Iyure yolonwabo imalunga ne 5 ish. Sisoloko sikhona ngexesha lokuhlala kwakho…
Inombolo yomthetho: HOT-000697